Shiinaha warshad duudduuban warqad kulul Fangda
Sumadda wareejinta kuleylka
Baqshadda Liiska Baakadka Warqadaha
Calaamadaha kuleylka tooska ah
Duub warqad kulul
Boostada Xumbada Poly
A4 Waraaqda Warqadda
Baqshadda Liiska Baakadaha PE
Baqshadda Liiska Xidhmada PP
Waraaqda kuleylka (mararka qaarkood loo yaqaan liiska xisaabinta) waa warqad qaas ah oo ganaax ah oo lagu daboolay walax loo sameeyay in lagu beddelo midabka marka kuleylka la kulmayo. Waxaa loo adeegsadaa daabacayaasha kuleylka, gaar ahaan aaladaha qaaliga ah ama qafiifka ah sida mashiinka lagu daro, diiwaanka lacagta iwm.
Cabir: 3 1/8 inji (u dhigma 80 * 80 mm)
Waxyaabaha: 55gsm warqad kuleyl ah
Dhex: balaastigga 13mm
Dhererka: 80m duubkiiba
Daabac: warqad madow ama buluug ah
Baakadaha: 27 duub / kartoon
* Waraaqda kuleylka leh ee Fangda waxay leedahay tayo sare oo daahan ah
* Dusha sare ee jilicsan ayaa si fudud ugu dhex wareegaya xisaabiyaha ama mashiinka POS, looma baahna in lala macaamilo jeexjeexyada dhexda ugu jira xisaabinta muhiimka ah.
* Midab labis dusha sare
* Looma baahna wax alaab daabacan, cajalad kaarboon ah ama kaydadka khad looma baahna inta la isticmaalayo
* Dahaadhku wuu madoobaanayaa markii la kululeeyo, laakiin daahannada isu beddela buluug ama casaan ayaa mararka qaarkood la isticmaalaa. Inkasta oo isha kuleylka furan, sida ololka, ay kala saari karto warqadda, ciddiyaha oo si dhakhso leh loogu wareejiyo warqadda ayaa sidoo kale ka dhalin doona kuleyl ku filan khilaaf si uu u soo saaro calaamado.
* Warqadaha duubku waxay la jaan qaadayaan daabacadaha kuleylka ee Epson TM-T88, Star TSP-100 daabacayaasha kuleylka, Bixolon SRP-350 daabacayaasha kuleylka, Citizen CT-S310 daabacayaasha kuleylka, Clover Station countertop POS system printers, iyo kuwa kale oo badan.
Codsiga warqadaha kululaynta:
* Habka hoteelka
* Nidaamka boostada ee POS
* Nidaamka isgaarsiinta
* Nidaamka caafimaadka
* Nidaamka Bangiyada
* Suuq weyn
* Kaalin shidaal
* Foornada daahan patent, horumarinta alaabooyinka iyo bay'adaha kala duwan
* Naqshadeynta gaarka ah ee ikhtiyaariga ah: udub dhexaad kala duwan, cabirrada dhinta oo dhinta, baakadaha iwm.
* Shaybaar cilmi baaris madaxbanaan
* Heerarka buuxinta ee REACH iyo ISO
* Dhexgalka Vertical: daahan silikoon, dhalaalka kulul qaadashada koolo iyo daahan, daabacaadda, dhinto cut cut dhammaan geeddi-socodka lagu dhammeeyo in aqoon isweydaarsiyo u gaar ah.
Hore: Boostada boosta
Xiga: Calaamadaha kuleylka tooska ah
Xaaladdaha isticmaalka alaabooyinka ayaa lagu muujiyey hoos